Забур 2 CARS - Nnwom 2 AKCB
1Adɛn nti na amanaman no hyehyɛ bɔne ho
na nnipa no bɔ pɔw hunu yi?
na sodifo ka wɔn ho bɔ mu
tia Awurade ne Nea Wɔasra no no.
“Momma yemmubu wɔn nkɔnsɔnkɔnsɔn
na yɛntow wɔn mpokyerɛ ngu.”
4Nea ɔte agua so wɔ ɔsoro no serew;
5Afei ɔka wɔn anim wɔ nʼabufuw mu,
hunahuna wɔn wɔ nʼabufuwhyew mu, ka se,
6“Masi me Hene
wɔ Sion, me bepɔw kronkron no so.”
7Mɛpae mu aka Awurade ahyɛde:
Ɔka kyerɛɛ me se, “Woyɛ me Ba;
nnɛ mayɛ wʼAgya.
na mede amanaman nyinaa bɛyɛ wʼagyapade,
asase ano nyinaa bɛyɛ wo de.
9Wode dade ahempema bedi wɔn so;
na woabobɔ wɔn sɛ ɔnwemfo ahina.”
10Enti mo ahemfo, munsua nyansa;
monkae kɔkɔbɔ yi, mo asase sodifo.
11Momfa osuro nsom Awurade
12Mumfew Ɔba no ano, na ne bo amfuw
na mo akwan de mo bɛkɔ ɔsɛe mu,
efisɛ nʼabufuwhyew tumi sɔre mpofirim.
Nhyira ne wɔn a woguan toa no nyinaa.
AKCB : Nnwom 2